အနိမ့်စျေးနှုန်းသည်ရွှံ့နွံ dewatering စက် China Manufacturer
မိုင်းစက်မှု Filter ကိုစာနယ်ဇင်း,စဉ်ဆက်မပြတ်အလျားလိုက်ခါးပတ်စာနယ်ဇင်း Filter ကိုစာနယ်ဇင်း,Professional က Filter ကိုစာနယ်ဇင်း
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: မိုင်းစက်မှု Filter ကိုစာနယ်ဇင်း,စဉ်ဆက်မပြတ်အလျားလိုက်ခါးပတ်စာနယ်ဇင်း Filter ကိုစာနယ်ဇင်း,Professional က Filter ကိုစာနယ်ဇင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > filter စာနယ်ဇင်း > ခါးပတ် Filter ကိုစာနယ်ဇင်း > အနိမ့်စျေးနှုန်းသည်ရွှံ့နွံ dewatering စက်
 အနိမ့်စျေးနှုန်းသည်ရွှံ့နွံ dewatering စက်
filter ကိုအထည် fixed အော်တိုဗန် filter ကိုစာနယ်ဇင်း 1. လျှောက်လွှာ
အဆိုပါ filter အထည် fixed အော်တို box ကို filter ကိုစာနယ်ဇင်းအသုံးပြုမှု၏ကျယ်ပြန့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ထဲမှာပါတဲ့, ကြီးမားတဲ့အမှုန်အရွယ်အစားနှင့် slag ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏနှင့်အတူပစ္စည်းများပိုမိုသင့်လျော်သည်။ ထိုကြောင့်ဝိသေသ, စက်မှုထုတ်လုပ်မှုနှင့်သတ္တုဗေဒ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ကျောက်မီးသွေး, ရေနံ, ဆေးပညာ, dyestuff, ကြွေထည်များနှင့်အခြားစက်မှုရေဆိုးကုသမှုစက်မှုရေဆိုးကုသမှု, ကျောက်မီးသွေးရေဆိုးကုသမှု၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနတွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
နှစ်ယောက်တည်း။ filter ကိုစာနယ်ဇင်း filter ကိုစာနယ်ဇင်းများ၏အားသာချက်များ
အဆိုပါပန်းကန်နှင့်ဘောင် filter ကိုစာနယ်ဇင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, filter ကိုစာနယ်ဇင်း filter ကိုစာနယ်ဇင်းကအောက်ပါသိသာအားသာချက်ရှိပါတယ်: အ filter ကိုပန်းကန်ရိနာစွဲလွယ်ကူချောမွေ့ရန်မွေးစားလျက်, filter ကိုပန်းကန်သွားဖို့မလွယ်ကူသည် ဖြစ်. , အဆိုပါ filter ကိုပန်းကန်အလိုအလျှောက်ဖိအားကာကွယ်မှုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖိအားပေးသည်, အဆိုပါ filter ကိုမိုဘိုင်း device ကိုအလိုအလျောက်ဆွဲဘုတ်အဖွဲ့နားလည်သဘောပေါက်မှတက်သတ်မှတ်; အဆိုပါ filter ကိုအထည် vibrator ကို set up ဖြစ်ပါတယ်, အ filter ကိုကိတ်မုန့်လုံးဝဖယ်ရှား, နှင့် filter ကိုကိတ်မုန့်သန့်ရှင်းရေးစက်ကိုမကြာခဏရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ filter အထည်အဆိုပါ filtration ထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါလျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်, စစ်ဆင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်သဘောပေါက်သောကို set up လုပ်သားအင်အားလွတ်မြောက်နှင့်အလုပ်ထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်နေပါတယ်။
သုံး။ filter ကိုအထည်ပြုပြင်နိယာမအလိုအလျှောက် box ကို filter ကိုစာနယ်ဇင်း fixed ။
အဆိုပါ filter စာနယ်ဇင်း filter ကိုစာနယ်ဇင်းပု filter ကိုစာနယ်ဇင်းအပေါ်ဖိအားပေးနေသည်, ထို feed ကိုစုပ်စက်အသီးအသီးသီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်အခန်း slurry ဖိအား filter မှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစိုင်အခဲမှုန်အဆိုပါ filter ကိုအခန်းထဲက၌ကျန်ကြွင်းနေကြသည်, ထို filtrate အဆိုပါ filter ကိုအထည်ဖြတ်သန်း, အ filter ကိုပန်းကန်၏ယိုစီးမှု groove အတွက် filter ကိုပန်းကန်၏ယိုစီးမှုထွက်ပေါက်မှစီးဆင်းလျက်, ဥတုစက်ဆေးရုံကဆင်းသည်။ အဆိုပါ filter ကို၏အဆုံးမှာစတင်အဝတ်လျှော်စုပ်စက်အရည်၏စစ်ထုတ်အခန်းထဲကအတွက် filter ကိုကိတ်မုန့်ကိုလျှော်ပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့လေအခြောက်မှ compressed ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းထိုးနှက်ပြီးနောက်, filter ကိုတင့်ကားစစ်ထုတ်သတင်းစာများ၏အောက်ခြေကနေဖယ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်, ထို့နောက်အဓိကရေနံဆလင်ဒါစတင်သည်နှင့်စာနယ်ဇင်းပန်းကန်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်သည်။
ထိုအခါပထမဦးဆုံးစစ်ထုတ်အခန်းထဲကအတွက် filter ကိုကိတ်မုန့်ဖွင့်စစ်ထုတ်အထည်ထံမှကျရောက်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းပန်းကန်အဆိုပါကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအနေအထားကိုရောက်ရှိသောအခါ filter ကိုပန်းကန်အကြားစစ်ထုတ်အထည်လူသားတစ်ဦးအသွင်သဏ္ဌာန်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့် filter ကိုကိတ်မုန့်သောကြောင့်, လဲကျရန်လွယ်ကူသောကွောငျ့, လေဆာရောင်ခြည်၏နှစ်ဖက်စလုံးပေါ်တွင်ပန်းကန်စက်ကိုအခြားပြီးနောက် filter ကိုပန်းကန်တဦးတည်းဖွင့်လှစ် ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်နှင့်အခွံရန်ခဲယဉ်းသော filter ကိုကိတ်မုန့်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်အားဖြင့် filtered နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအထည်တုန်ခါမှု device ကိုအလျင်အမြန်ချွတ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခံရဖို့ filter ကိုကိတ်မုန့်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ filter ကိုကိတ်မုန့်လုံးဝဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ပါသည်ပြီးနောက်အဓိကရေနံဆလင်ဒါ activated ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဖိအားပန်းကန်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်သံသရာပြီးစီးခဲ့ကြောင်းဒါအတူတကွအပေါငျးတို့သ filter ကိုပန်းကန်ချုံ့ဖို့တွန်းအားပေးနေသည်။ filter ကိုအထည်ပျော်စေဥတုပြီးနောက်သို့မဟုတ်အများအပြားအလုပ်လုပ်ကိုင်သံသရာပြီးနောက်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : filter စာနယ်ဇင်း > ခါးပတ် Filter ကိုစာနယ်ဇင်း
ဘိလပ်မြေကျီတစ်ခုအတွက်ဖုန်မှုန့် Dacron အိတ် filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘိလပ်မြေလညျးမီးဖိုဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက် PPS filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: မိုင်းစက်မှု Filter ကိုစာနယ်ဇင်း , စဉ်ဆက်မပြတ်အလျားလိုက်ခါးပတ်စာနယ်ဇင်း Filter ကိုစာနယ်ဇင်း , Professional က Filter ကိုစာနယ်ဇင်း , မေပယ်ရည် Filter ကိုစာနယ်ဇင်း , အလိုအလျောက်ခါးပတ် Filter ကိုစာနယ်ဇင်း , ပန်းကန်-and-Frame ကစက်မှု Filter ကိုစာနယ်ဇင်း , ရောင်းမည်ခါးပတ်စာနယ်ဇင်း , CXSW ခါးပတ် Filter ကိုစာနယ်ဇင်း